Anciens Footballeurs d’Ivato » nokarakarain’ny KMG « Komity Miara-miasa amin’i Goddefrin » tarihan’ny filohany Rasoamiaramanana Goddefrin, fikambanana mpanao asa soa eny amin’ity faritr’Ivato ity. Izy ihany koa no filoham-boninahitry ny A.A.F.I ankehitriny. Ekipa nahatratra 55 no nandray anjara tamin’ny fifaninanana nanomboka tamin’ny volana martsa 2019 lasa teo. Toy izao ny vokatra azo teo amin’ireo lalao famaranana rehetra ka nanoloarana amboara sy baolina filalaovana maromaro :
Defi Retour : Ex Militaire A.A.F.I 1 – 1 Civils A.A.F.I
Vétéran + 38 ans : Akim Ivato (7) 1 - 1 (8) Taxi Agrée Ivato
Super vétéran + 45 ans : Cobra Ivato (4) 1 -1 (5) Super Aigle Ivato
Fille : Fc Mami K.3 1- 1 15 Famllles Ivato
Sénior : Fc K . 1 0 – 1 Chez Maman
Nisy ihany koa taorian’ireo famaranana ireo ny fanoloran’ny KMG taratasim-bola mitentina 1.000.000 ariary hanampiana ny katitakelin’ny Ajesaia Ivato (13-14 taona) handeha hiatrika “Tournoi Mini Mondial” amin’ny 3 aogositra 2019 izao mandritra ny 1 volana any Chine.